Box Office – Page 55 – Filimside.net
Day 2 Update: Avengers – Infinity War shalay iska hilmaan ganacsigiisa maanta cirka ayuu marayaa
April 28, 2018 Zakarie Abdi
Avengers – Infinity War wuxuu u gadmayaa sida filim Hindi atoorayaal waa weyn la isugu keenay taasi oo muujineyso in Hollywood-ka ay hadda xureesteen dhul weynaha Hindiya. Filimka Avengers – Infinity War shalay Hindiya oo dhan […]
Top 10 Opening Days: Avengers – Infinity War oo kaalinta 8-aad ka galay filimada Hindiya ugu bilaabashada wanaagsan
Filimka Avengers – Infinity War ayaa holac ka shiday Boxoffice-ka India kadib markii maalinta kowaad uu keenay 30.75 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday. Filimka ugu wanaagsan ee Hollywood ah kaasi oo ganacsi wacan maalinta kowaad […]
Maxaa kasoo kordhay ganacsiga Avengers: Infinity War ee khamiistii gelinka dambe USA laga daawaday?
Filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers: Infinity War ayaa siweyn kaga bilaawday gudaha USA Boxoffice weliba $39 million ayuu keenay Khamiistii gelinka dambe ama fiidkii daawashadiisa gudaha Mareekanka laga daawaday. Waa maalin barkeed wax aan dhameyn wuxuuna keenay $39 […]
Rasmi: Suldaan Mahesh Babu filimkiisa Bharat Ane Nenu ganacsiga uu sameeyay todobaadka kowaad
Suldaan Mahesh Babu filimkiisa Bharat Ane Nenu ayaa sameeyay ganacsi rikoor ah todobaadkiisa kowaad dibad iyo dal waana rikoor Telugu ku cusub marka Baahubali labadiisa qeyboos aan xisaabta lagu darin (Non Bahubali Record). Sida shabakada Andhara […]
Rasmi: filimka Avengers – Infinity War iyo maalinta kowaad ganacsiga uu Hindiya ka sameeyay inaba caadi ma ahan
Filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers – Infinity War ayaa gudaha Hindiya si waali ah ku qabsaday asigoo noqday sanadkaan 2018 filimka ugu bilaabashada wanaagsan dhamaan aflaanta Bollywood-ka sameeyeen. Avengers – Infinity War wuxuu keenay 30 Crore ilaa 30.50 […]
BOI: Bollywood-ka ceeb uma harin Avengers – Infinity War maalina kowaad 30 Crore ayuu keeni doonaa!
April 27, 2018 Zakarie Abdi
Shabakada Boxoffice India ayaa ceebeestay fanka Hindiya kadib markii ay soo daabaceen maqaal ay ugu magac dareen “Avengers – Infinity War oo labo cad ka kala dhigay Boxoffice-ka fanka Hindiya!” Filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers […]
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filimka Classic Ah Qayamat Se Qayamat Tak Oo 30 Kasoo Wareegatay Daawashadiisa Oo Uptade Ah
April 27, 2018 Aadan Muriidi
Waxaa 30 sano ka hor la daawaday filimka jaceylka Classic-ka ah ee Qayaamat Se Qayaamat Tak kuna soo caan baxeen Aamir Khan Iyo Juhi Jawla fadlan hoos kaga bogo xaqiiqooyin ku saabsan filimkaan Classic-ka ah […]
Dooda USA Boxoffice: Avengers: Infinity War rikoorka sedexda maalmood ugu horeyso ma jebin karaa?
Filimka ugu weyn ee Hollywood taariikhdan casriga ah sameeyaan Avengers: Infinity War ayaa lagu kalsoon yahay inuu jebin karo rikoor walbo oo gudaha USA horey looga dhigay iyo suuqyada caalamka. Bishii May sanadii 2012 filimkii The […]
Aqbaar weyn: Avengers – Infinity War oo noqday filimka ugu bilaabashada wanaagsan gudaha Hindiya sanadkan 2018
Waxaan caadi ahayn ayaa subaxaan ka socdo ganacsi ahaan tiyaatarada gudaha Hindiya madaama filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers – Infinity War uu si waali ah ku furmay. Avengers – Infinity War ayaa ku furmay 70% ilaa 75% sida shabakada […]
Filimada October Rampage iyo And Nanu Ki Jaanu ganacsiga ay sameeyeen
Varun Dhawan filimkiisa October ayaa keenay 9.75 Crore (Trade Figure) todobaadkiisa labaad taasi oo ka dhigan wadarta guud mudo labo todobaad ah inuu soo xareeyay 37.50 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday. October ayaa sameeyay 65% hoos […]
« 1 … 54 55 56 … 208 »